Forum serasera malagasy Ny fiheveran-dison'i Darwin, fizaràna fahatelo - Dinika forum.serasera.org
Ny fiheveran-dison'i Darwin, fizaràna fahatelo
Fitohizan'ny hafatra : Ny fiheveran-dison'i Darwin, fizaràna fahatelo
Nehemiah - 08/05/2013 10:44
Andeha isika hijerijery akaikikaiky ny "The Origin of Species" nosoratan'i Charles Darwin. Raha ezahana fintinana io boky io dia milaza fa avy @ sela tsotra ny zavamananaina ankehitriny ary ny fiangonana (tsy lalaon-teny izany an !) tsikelikelin'ny fiovàna sy ny fandringanana miverimberina tao anatin'ny tapitrisa taona tsy tambo isaina no nahafahan'ity sela ity hivoatra sy hihamaro karazana ka nanjary ny zavamananaina rehetra hitantsika manodidina antsika androany.
Nohon'izay, tokony manambara ny paleontôlôjia fa arakaraky ny idinana @ vato misy fôsily no ahitàna karazan-javamananaina tsotsotra rafi-batana kokoa.
Hita taratra @ "hazon'ny fiainana", na ny tetiaran'ny fiaina, izany :
Ity ihany no mba sary mibahana pejy 1 manontolo @ bokiny. Hevitra efa nakotriny taloha lavitran'izay ity hevitra ity :
Kanefa ny mahavariana dia izao no lohatenin'ny gazety "New Scientist" t@ fankalazàna ny fitsingerenan'ny faha-200 taonan'ny nahaterahan'i Darwin : "Darwin was wrong! Nilaza ilay izy fa tsy hazo intsony no tetiaran'ny fiainana fa tranon-kala. Ka moa misy mahalala hoe aiza no manomboka ary aiza no miafara ny tranon-kala afa-tsy ny hala nanorina azy ?
Andeha isika hijery olana vitsivitsy @ haiain'i Darwin any @ gisement-na fôsily sarobidy indrindra @'izao tontolo izao, izany hoe ny schiste any Burgess any @ Kôlombia Britanika. Saropady mihitsy io toerana io : misy kamerà fanaraha-maso, 6 ora isan'andro ihany no ahafahana mitsidika azy, ary tsy maintsy mikarama mpampitsidika evôlisionista ny mpitsidika fa tsy afaka mitsidika fotsiny @'izao.
Eto @ toerana tondron'ny flesy @'ity kisarisarin'ny tantaran'ny evôlisiona no heverina ho niveloman'ny biby izay hita fôsily any Burgess, izany hoe t@ fotoan'andron'ny Cambrien ambany.
Saropady mihitsy io toerana io : misy kamerà fanaraha-maso, 6 ora isan'andro ihany no ahafahana mitsidika azy, ary tsy maintsy mikarama mpampitsidika evôlisionista ny mpitsidika fa tsy afaka mitsidika fotsiny @'izao.
Tena nanoratra boky nitondra ny lohateny hoe "Wonderful life" (avy t@ sarimihetsik'i Jamie Stewart) momba an'ity toerana ity mihitsy i Stephen Jay Gould, ilay paleontôlôga lehibe indrindra t@ taon-jato faha-XX.
Ka izao no zavatra hitan'i Gould tany Burgess :
Eo ambony, ny néo-darwinisme izay mbola ampianarina ho dôgma any @ toeram-pampianarana sady milaza fa tsy ho hita eo am-pitranganana mihitsy ny evôlisiona satria miadana loatra : miangona tsikelikely @ fomba tsy hita maso ny fanatsarana izay ahafahan'ny karazan-javamananaina mivoatra.
Eo ambany, ny fitobohana miteboka naroson'i Gould sy ny namany Eldredge : maro tsy misy toy izany ny karazan-drafibatan'ny zavamananaina t@ voalohany, fa saingy betsaka dia betsaka @'ireny no ringana, ka nanjary sampana (phylae) roa sisa no tafajanona ka niroborobo. Tsy ho hita eo am-pitranganana mihitsy koa ny evôlisiona @'ity, fa ny antony no mifanohitra : satria tampotampoka loatra ilay izy : tonga dia mipoitra ny karazan-javamananaina miavaka (ary izay koa no iantsoana azy hoe "saltationnisme").
Na ny atsy na ny aroa moa dia milaza fa tsy ho hita eo am-pitranganana ny evôlisiona dia samy afa-po.
Ity no tena mahatalanjona @ schite any Burgess :
Tsy nanana haràka @ fomba fahazoantsika azy @ fiainana andavanandro ny zavamananaina hita fôsily any, fa malemy ny vatany, kanefa mbola voatahiry ao ny vatany, satria tsy mariky ny fitsindrian'ilay zavamananaina @ vato no hitantsika eo fa tena ny vatany mihitsy no voatsindry ao fa saingy mbola tanteraka. Lazaina ho 660 000 000 taona ireo, kanefa sarotra inoana izany : hitanareo mantsy, tsy ny biby rehetra tototry ny fotaka no mivadika ho fôsily : raha mbola misy mikrôba ao anatin'ny vatany aorian'ny fahafatesany dia ho lo izy, ka @ fomba ahoana izany no voatahiry tsara mandritry ny 660 tapitrisa taona ireo zavamananaina ireo ?
Ireto misy santionany @ zavamananaina hita any Burgess :
Ity no "sefo deba".
Mahavariana indrindra ity biby ity satria impair ny isan'ny membres-ny !!! Tsy misy biby mitovy @ ankehitriny (satria ahitàna kilasin-javamananaina efa lany taminga ny schiste any Burgess), fa ny biby rehetra hita ankehitriny dia manana tongotra mandeha tsiroaroa.
Ny an'azy indray dia ny isan'ny masony no impair ! Maso 5 ! Na dia ny hala aza dia manana maso 8 ! Manentana anareo hikaroka sarin'ireny biby ireny @ Aterineto aho, fa tsy ho diso fanantenana ianareo !
Manahoana dadabe !
Kôzy sérieux an izao : lazaina ho razantsika io biby io satria nanana kisarisarina hazon-damosina izy !
Ireto zavamananaina rehetra ireto dia ampahan'ny atao hoe "fipoahana cambrienne" : nipoitra tampotampoka teo ireto karazan-javamananaina be dia be ireto, nohon'ny antony tsy fantatra, satria tsy ahitàna biby ifandraisany @ vanim-potoanan'ny précambrien izy ireo.
Hitantsika @'ity sary ity ilay izy : tsy nisy afa-tsy "protistes, izay biby manana sela 1, ny précambrien. Kanefa misy karazan-javamananaina maro mipoitra @ cambrien. Tsy mahagaga raha nanolotra teôria hafa ankoatran'ny néo-darwinisme i Gould, izay manam-pahaizana faran'izay lalin-tsaina !
Mety gaga be ianareo mahita trondro nipoitra t@ cambrien nefa tokony @ dévonien no izy, kanefa lazaiko marimarina tokoa ianareo fa nahitàna trondro (izay biby manana hazon-damosina) ny soson-dilatra nodatiana t@ cambrien tany Chine t@ taona 2000 !
Izao no nolazain'ny gazetin'ny antoko komonista sinoa Guang Ming Daily :
T@ voalohany, teôria ara-tsiansa ny evôlisionan'i Darwin... Raha ny marina dia lasa fivavahana ny evôlisiona.
Mba eritrerito anie e !!! Tsy mahatsikaiky indrindra ve izany ?! Ny antoko komonista sinoa no mba miteny an'izay !!! Mandehana anie ianao miteny an'izay any @ oniversite any @ firenena demôkratika mandroso dia ho hitantsika raha mbola ho avela hiasa @ sehatry ny siansa ianao !
Tokanamantany ny toerana ahitàna fôsily antitra noho ny any Burgess (@ fomba fijery mandala evôlisiona) dia any Ediacara, any Aostralia Atsimo, no misy azy.
Eto no misy azy, @ précambrien ambony.
Nahitana karazana "volomboron-dranomasina" hafahafa ny any, fa ity kosa no tena mahavariana :
Biby manana hazon-damosina kay ilay izy !!!
Izao no nolazain'ny mpanao gazety Nance Haxton t@ www.abc.net.au :
Ity fôsily ity, izay 6 sm fotsiny ny halavany, dia heverina ankehitriny ho ilay biby manana hazon-damosina antitra indrindra, 560 tapitrisa taona ny taonany. Manaporofo ilay izy fa taloha lavitry ny nieritreretana azy hatrizay no nipoiran'ny zavamananaina manana rafibatana avo lenta. Miendrika tsiboboka ilay izy, nanana hozatra, rambo, vombo, ary indrindrindrindra hazon-damosina. Izay rafitra izay no mety mampanjary ho Graala Masina izay nofinofin'ny manam-pahaizana, manambara ny fiavian'ny fiainana, an'ity biby ity.
Hitantsika eto fa matetika, rehefa manoratra momba ny siansa ny mpanao gazety tsotra dia tsy misy raha azony. Tsy mba Grahala Masin'ny evôlisiona darwiniana an io fa Fasana Masiny, satria raha afindra taloha kokoa ny vanimpotoana nipoiran'ny biby manana hazon-damosina dia manjary kelikely kokoa ny fotoana nananan'ny biby mba hivoatra hanjary biby manana hazon-damosina e !
Diniho kely anie ity sary ity fa misy raha hafahafa :
Isika olombelona moa @'izany dia 0,002%-n'ny fotoana nisian'ny tany (4,5 miliara taona) no fotoana nivoarantsika (7 tapitrisa taona).
Kanefa, raha ny fotopisainan'i Darwin, arakaraky ny mahatsotra ny zavamananaina 1 no mampalaky ny fivoarany, satria manana fiantraika bebe kokoa ny sampona 1 ary malaky miteraka kokoa izy ireo (afaka miteraka mikrôba vaovao ao anatin'ny 20 mn ny mikrôba 1) ka malaky miampita @ taranaka kokoa ny sampona 1. Kanefa ny zavatra tsikaritra eto dia ny protistes indray no nivoatra ela indrindra. Dia gaga ialahy !
Izany dia mampahatsiaro ny tenin'ny manam-pahaizana anankiray izay :
Raha ny teôria dia tsy misy mahasamihafa ny teôria sy ny fampiharana. Raha ny fampiharana kosa dia msiy !
Nehemiah - 08/05/2013 10:45
Ity no rohy mankany @ fizaràna taloha ho an'izay liana :
Miharena - 09/05/2013 19:16
Lasa nitatra be ilay velaran'ny hafatra dia tsy misy hita ny tian'ny mpanoratra lazaina.
Nehemiah - 10/05/2013 09:01
Afa-baraka... Andraso ary fa averina
Nehemiah - 10/05/2013 09:13
Naveriko aty ilay izy fa manjary mavesatra be ny takelaka :